Calaamadaha fudud ee "Easy Opportunities" ayaa si sahlan u soo jiidanaya malaayiin qof oo Twitter ah
Haddii aad halis u tahay helitaanka taageerayaal badan oo Twitter ah, waxaad gaadhay meesha saxda ah. Agaasimaha Artem Abgarian, Maamulaha Guud ee Macaamiisha ee Semt , ayaa kuu sheegi doona siyaabo aad u fiican oo aad u hesho taageerayaal badan oo Twitter ah
Farshaxanka Maqalka Biyo
Inta badan, dadku waxay ku aqoonsan doonaan biography iyo sawirkaaga profile. Taasi waa sababta aad u falanqeynayso riwaayad iyo jilicsanaan soo jiidasho leh si aad u soo jiidato dad badan oo ka mid ah boggaaga Twitter. Sanduuqa alaabtaada waa inuu u sheegaa dhammaan waxyaabaha asaasiga ah ee ku saabsan shakhsiyaadka, qoyska iyo nolosha xirfadlayaasha. Halkan waxaa lagaa doonayaa inaad qoro 160 jilaa oo aad si wacan u qeexdo naftaada. Isticmaal goobo badan oo daboolo dhamaan asaaska noloshaada si aad dadka ugu dhiirri-geliso inay kuu raacaan - شركات نقل عفش من الدمام.
Soo qaado sawir dhab ah oo adiga kugu saabsan
Ma aha khalad in la sheego in xisaabaad cusub aysan suurtogal ahayn in lagu sawiro sawirro dhab ah. Laakiin haddii koontadaada ay ka weyntahay lix bilood, waa inaad sawir ku samaysaa sawirkaaga oo aduunkuna ha ogaado shakhsiyaadkaaga iyo muuqaalkiisa. Dadka ku jira Twitter waxay soo jiitamayaan muuqaallo sawiro leh, markaa waa inaadan waligaa marnaba ku soo rogin caqli ama caajisnimo sababtoo ah waxay burburin kartaa sumcaddaada guud.
Jawaabta Tweets Publicly
Raac jihaadayaasha iyo boggaga caanka ah
Waa inaad tixgelisaa ka dib khabiirada Twitter iyo boggaga caanka ah. Ku dar kuwa kale gaar ahaan caanka ku ah boostadaada si aad u kordhiso tirada dadka raacsan. Adigoo raacaya dadka saxda ah, waxaa laguu xaqiijin karaa helitaanka internetka waxayna bilaabi kartaa wada hadal si loo kordhiyo tirada taageerayaasha ah ee Twitter.
Ma jiraan wax laga walwalo haddii dadku ay kaa dhuubtaan, laakiin waxaad ka heli kartaa taageerayaal badan adigoo la wadaagaya waxyaabo xiiso leh iyo kala hadal waxyaabaha wanaagsan ee Twitter.
Caawinta Dadka Barta
Waa inaad ka caawisaa dadka Twitter inay ku kordhiyaan tirada dadka raacsan. La shaqee dadka kale iskuna day sidii aad u xalin lahayd dhibaatooyinkooda; ha ahaato wax walba oo ku hawlan wadahadalka oo lacag ka sameeya warbaahinta bulshada adigoo isticmaalaya boggaaga iyo xayeysiisyada. Inta aad shaqeyneyso internetka, haddii aad aragto in qof uu baahan yahay caawimaad, waa inaad diyaar u ahaataa inaad caawiso.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, waa in aad si joogta ah u fariisisaa marwalba si dadku u soo jiito xisaabtaada Twitter. La wadaag tayada tayada iyo walxaha macluumaadka maalin kasta sida tani waa sida kaliya ee aad uga heli lahayd taageerayaal badan oo Twitter ah maalmo yar gudahood. Ma jirto baahi loo qabo in lagu helo musuqmaasuq been abuur ah maadaama ayan kaa helin hogaamiyayaal wacan ama ganacsi kasta oo internetka ah.